लायन्सको क्याबिनेट बैठक बागलुङमा, ३ हजार प्रतिनिधीले भाग लिने, रु ४४ लाख खर्च ! – ebaglung.com
२०७३ फाल्गुन ५, बिहीबार २२:५९	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
प्रतिनिधीहरुका स्वागत र -याली प्रभावकारी गराउन चोक चोकमा नाँच प्रदर्शन गरिने !
कोपिला कंडेल, बागलुङ २०७३ फागुन ५ । फागुन ६ गते देखी बागलुङमा शुरु हुन लागेको लायन्स क्लवको तेस्रो क्याबिनेट बैठकको सबै तयारी पुरा भएको छ । लायन्स क्लव बागलुङले आज पत्रकार भेटघाटको आयोजना गरी यस्तो जानकारी गराएको हो । फागुन ६ र ७ गते हुने क्याबिनेट बैठकमा देशभरका तिन हजार बढि लायन्स प्रतिनिधीले सहभागिता जनाउने बैठकका मुल समारोह समितिका संयोजक लायन काजिमान गुरुङ्गले जानकारी दिए ।
स्थानिय उत्पादन ब्यापार व्यबसाय, कला, सस्कृति को प्रवर्दन गर्न, आन्तरीक तथा बाह्य पर्यटनको प्रवर्दन गर्न, बागलुङ तथा धौलागिरी क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, सास्कृतिक, प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय पर्यटनका क्षेत्रहरुको सम्भावना र अवसरहरुको प्रचार प्रशार गर्न, लायन्स क्लब्स ईन्टरनेशनल जस्तो गरिमामय सामाजिक सस्थाको ईतिहासमा ईटा थप्न, बागलुङ जिल्लाका लायन्स क्लबको क्षेत्रमा गौरवसाली ईतिहासको निर्माण गर्न तथा लायन्सहरुको सस्थागत तथा वैयक्तिक क्षमताको विकाश गर्न लायन्स क्लवको तेस्रो क्याबिनेट बैठक महत्वपूर्ण हुने संयोजक गुरुङको भनाई छ ।
बैठकलाई ब्यवस्थीत गर्नका लागि बिभिन्न समिति तथा उपसमिती गठन गरिएको छ । क्लवको २० औ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित सो बैठकमा २ सय ९३ क्लवले सहभागिता जनाउने प्रचार प्रसार उपसमितिका संयोजक राजेशचन्द्र राजभण्डारीले बताए । बैठक सम्पन्न गर्नका लागि करिब ४४ लाख खर्च लाग्ने लायन्स क्लव अफ बागलुङ सिटीका अध्यक्ष दुर्गा कुवरले ईबागलुङलाई बताए ।
देशभरबाट आउने लायन प्रतिनिधी र बिभिन्न सघंसस्थाबाट सहयोग संकलन गरीने छ । लायन्सले शुक्रवार बिहान ८ बजे शान्ति र्याली प्रदर्शन गरिने छ । क्याम्पस चोकबाट निश्केको र्यालीले बजारका बिभिन्न भागको परिक्रमा गर्ने लायन्स क्लव अफ बागलुङ कालिकाका पुर्व अध्यक्ष नरेश कंडेलले जानकारी दिए । र्यालीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हल्लनचोकमा जोगी नाच, लोकतान्त्रिक चोकमा हनुमान नाँच र प्रशासन नजिक बुद्ध बिहारमा लाखे नाच प्रदर्शन समेत गरिने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएका छन् ।
सो अवसरमा बोल्दै पत्रकार महासघंका अध्यक्ष दिल शिरिषले पर्यटन प्रबद्धन एबं जिल्लाको बिकाशका लागि लायन्स क्लवको क्याबिनेट बैठक महत्वपुर्ण हुने बताउदै जिल्लाको पर्यटकीय बिकास एबं प्रचार प्रसारका लागि संचारमाध्यमले सक्दो भुमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
तारा गाविस- ७ नाँगीमा रिङ्गरोड विस्तार सुरु !